डा. सुमित्रा अमात्य | गृहपृष्ठ
Home विकास डा. सुमित्रा अमात्य
फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा प्राविधिक सहयोग केन्द्र अहिले के गरिरहेको छ ?
अहिले हामी नेपालका ५८ओटै नगरपालिकामा फोहोर व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक सहयोग दिने काम गरिरहेका छौं । साथै फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने केन्द्रीय निकाय भएकाले आवश्यक नीतिनियम पनि निर्माण गर्ने काम गर्छौं । त्यस्तै, नगरपालिकामा हाल भएकै जनशक्तिलाई फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम पनि गरिरहेका छौं । उनीहरूलाई व्यवस्थापनका नयाँ प्रविधिबारे पनि जानकारी दिने काम गर्छौ ।
नेपालमा फोहोरमैला धेरैको प्राथमिकतामा पर्दैन । के यसले कुनै क्षेत्रस“ग सम्बन्ध नराख्ने भएर यस्तो भएको हो ?
अवश्य पनि होइन । फोहोरमैला व्यवस्थापनले धेरै कुरालाई समेट्छ । यसले वातावरणीय, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय, पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक क्षेत्रलाई पनि समेटेको हुन्छ । साथै, यी कुराको दिगो रूपमा संरक्षण र स्थायित्व कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई पनि जोड दिन्छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनले दिगो विकासको अवधारणालाई अवलम्बन गर्छ । यसले हाम्रो संस्कार र सभ्यताको चिनारी दिन्छ । हाम्रो जीवनस्तर र कति सभ्य छौं भन्ने कुरा देखाउँछ । त्यसैले, कुनै नयाँ शहरमा पुग्नुभयो भने त्यो शहरको बाहिरी आवरण हेरेरै त्यसबारे सजिलै पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ ।
दिगो विकासको मुद्दालाई यसले कसरी उठाउछ ?
फोहोरमैला व्यवस्थापन दिगो विकासको अभिन्न अङ्ग हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन । हरेक देशको विकासको चरणलाई हेर्ने हो भने त्यो देशले व्यवस्थापन गरिरहेको फोहोरमैलाको मुद्दा पनि पर्छ । विकसित देशहरू र ती देशका विशेषगरी शहरी क्षेत्रमा फोहोरमैला देखिँदैन । ढल र अन्य फोहोरको निकास प्रणाली अत्यन्तै शक्तिशाली र ‘अप टु डेट’ रहेको पाइन्छ । त्यसैले, यसलाई समाज विकासको पूर्वाधारको पहिलो सूचकका रूपमा लिन सकिन्छ । वास्तवमा संसारभर यही कुरालाई अवलम्बन गरिएको छ । हामी विकासको शुरुआती अवस्थामा छौं, जुन विकास ती देशले ५० वर्षअगाडि नै देखिसकेका छन्, अनुभव गरिसकेका छन् । हामीले प्रयोग गर्ने प्रविधि पनि उनीहरूको भन्दा ५० वर्ष ढिलो छ । संसारभरकै कुरा गर्दा पहिला जनसङ्ख्या कम थियो । फोहोर पनि थोरै जम्मा हुन्थ्यो । जमीनको हिस्सा ठूलो थियो । विस्तारै जनसङ्ख्याको वृद्धिसँगै धेरै उत्पादनशील जमीन पनि फोहोरमैला थुपार्ने ‘ल्याण्डफिल्ड साइट’का रूपमा प्रयोग हुन पुग्यो । यसको विकल्पमा विकसित देशले फोहोरको पुनः प्रयोग (रि–साइकल) गर्ने कुरा सोचिसकेका छन् । त्यसका साथै प्रविधिको पनि विकास गरिरहेका छन् । उनीहरू फोहोरलाई समस्या होइन, कच्चापदार्थका रूपमा लिन्छन् र आर्थिक आर्जनको स्रोत भएको छ । तर, हामी बल्ल नगरपालिकाहरूमा ल्याण्डफिल्ड साइट निर्माण गर्ने चरणमा छौं । यसलाई नकारात्मक र समस्याका रूपमा हेर्ने गरेका छौं । यसको सही व्यवस्थापनले आर्थिक उपार्जन पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामीले अझै ध्यान पुर्‍याउन सकेका छैनौं ।
फोहोरलाई आर्थिक उपार्जन सँग कसरी जोड्न सक्छौं ?
वार्षिक करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर हामी पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्छौं । त्यसको प्रयोग ल्याण्डफिल्ड साइटसम्म फोहोर ओसार्नका लागि गरिरहेका छौं । यो व्यवस्थापनको उत्तम विकल्प होइन । फोहोरलाई कच्चापदार्थका रूपमा विकसित गर्ने अवस्थामा हामी जुन दिन पुग्छौं, त्यो दिन मात्र हामी पट्रोलियम पदार्थमा प्रयोग हुने रकम देशको भौतिक विकासमा लगाउन सक्नेछौं । त्यसका लागि घरघरबाटै फोहोरको वर्गीकरण, सङ्कलन र प्रविधिको प्रयोग गर्दै पुनः प्रयोग गरी आर्थिक उपार्जन गर्न सक्छौं ।
भर्खरै नेपालका ५८ ओटै नगरपालिकाको फोहोरमैलाको अवस्थाबारे ‘बेसलाइन सर्भे’ सम्पन्न गर्नुभएको छ । अवस्था कस्तो पाउनुभयो ?
हो, हामीले भर्खरै यसलाई सम्पन्न गरेका छौं । यो सर्भेलाई नेपालका सबै शहरी क्षेत्रका फोहोरमैलाको अवस्थाबारे गरिएको अध्ययन भन्दा पनि फरक पर्दैन । यस अध्ययनले हामीलाई कुन ठाउँमा कस्तो प्रकारको फोहोर उत्पादन हुन्छ । कति किसिमका फोहोर उत्पादन हुन्छन् । कुन क्षेत्रमा बढी फोहोर हुन्छ भन्नेजस्ता कुरा थाहा पाउन सम्भव भएको छ । यसले स्थलगत रूपमै आधारभूत जानकारी उपलब्ध गराएको छ । तर, यो नै सधैंको लागि स्थायी तथ्याङ्क भने होइन । यसमा हरेक वर्ष परिवर्तन आउन सक्छ । फोहोरको प्रकृति र मात्रा ठाउँअनुसार फरक आउन सक्छ । जस्तो कि काठमाडौं जस्ता ठूला शहरमा अजैविक (नकुहिने) फोहोरको मात्रा बढी छ भने त्यसको तुलनामा साना शहरमा जैविक फोहोरको मात्रा बढी छ । मानिसको जीवनस्तर वृद्धि हँुदै जाँदा जैविक फोहोरको मात्रा घट्दै गएको देखियो । त्यस्तै, धनी मानिसले बढी फोहोर गर्ने गरेको पाइयो । अर्को कुरा गत आव र चालू आवमा गरी कुल १८ नगरपालिकामा रणनीतिक योजना बनाउँदै छौं । यसको कार्यान्वयनका लागि पनि काम गरिरहेका छौं । साथै जनचेतना अभिवृद्धिमा पनि हामी सक्रिय भएर लागेका छौं । किनकि, फोहोर आममानिसको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको
विषय हो ।
फोहोरको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ?
फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐनले फोहोरमैलाको व्यवस्थापन स्थानीय निकायको आफ्नो हुनेछ भनेर उल्लेख गरेको छ । त्यसैले, स्थानीय निकायको जनशक्तिलाई यसबारे जागरुक बनाउनु हाम्रो प्राथमिकतामा पर्छ । त्यस्तै, फोहोर व्यवस्थापन गर्न घरले प्रयास गर्नुप¥यो । घरले सक्दैन भने टोलछिमेकले यसका लागि पहल गर्नुपर्छ । त्यसले पनि नसके नगरपालिकाको सम्बन्धित शाखाले गर्नुपर्छ । हाम्रो अध्ययनले ६० देखि ७० प्रतिशत फोहोर कुहिने वा जैविक फोहोर हुने देखाएको छ, जसलाई मल वा ग्यास बनाउन सकिन्छ । साथै, फोहोर व्यवस्थापनप्रतिको धारणामा परिवर्तन ल्याउन पनि जरुरी छ । यो त्यसबेला फोहोर बन्छ, जब हामी त्यसलाई वर्गीकरण नगरी सबै प्रकारका फोहोरलाई एकै ठाउँमा मिसाउँछौं । गुण र प्रयोगअनुसार छुट्ट्याएपछि यो फोहोर नभई कच्चापदार्थ बन्छ । कम्पोष्ट मल वा पुनः प्रयोग गर्न सकिने गरी विभिन्न वस्तु बनाउन सकिन्छ । हामी सबैले फोहोरलाई कम्पोष्ट मल बनायौं भने आफ्नै लागि प्रयोग गर्न सक्छौं । यो मलको प्रयोग गरी उत्पादन गरीएका वस्तु अग्र्यानिक हुन्छन्, जुन स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ । यसले वातावरण स्वच्छ राख्न पनि सहयोग गर्नेछ । त्यस्तै हाम्रो समाज सभ्य हो भन्ने चिनारी पनि दिन्छ ।
केन्द्रले भोगिरहेका समस्या केके छन् ?
पहिलो समस्या त हामी आफै पनि अझै सक्षम छैनौं । अरूलाई केही कुरा सिकाउनुअघि आफै सक्षम हुन जरुरी छ । त्यस्तै, सरकारले हामीलाई उपलब्ध गराउने बजेट न्यून छ । करीब ६ करोड रुपैयाँ मात्र बजेट छुट्ट्याउने गरेको छ । यसले सबै नगरपालिकामा ठोस काम गर्न सकिएको छैन । साथै सरकार, स्थानीय निकाय र आमनागरिकको पनि प्राथमिकतामा छैन । यसलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ ।